Baolina lavalava- Vehivavy :: Ho mafimafy ny miandry ny Makis any Tonizia • AoRaha
Baolina lavalava- Vehivavy Ho mafimafy ny miandry ny Makis any Tonizia
Hanainga anio ho any Tonizia ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina lavalava lalaovin’olona fito na ny Makis sokajy vehivavy. Hanomboka hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika izy ireo, amin’ny 12 oktobra 2019. Hotanterahina ny 13 oktobra ho avy izao kosa ny dingana famaranana amin’izany lalao izany. Henjana ny fifandonana voalohany satria hihaona amin’
i Maraoka, izay manana an’ ireo mpilalao mpila ravinahitra avy any Frantsa. “Ekipa mbola tsy nifaninana tamin’ ireo mpilalao malagasy ireo an-dry zareo Maraokanina. Fantatra kosa fa hampiasa mpilalao mpila ravinahitra avy any Frantsa miisa efatra izy ireo”, hoy Randrianarison Eric, mpanazatra nasionaly.
Iray vondrona amin’i Maorisy sy Tonizia ihany koa ny ekipa malagasy ankoatra an’i Maraoka ao amin’ny vondrona C misy ny Makis amin’ny fifaninanana. Efa nifandona tamin’ny ekipam-pirenena kosa ireo mpilalao maorisianina sy tonizianina teo amin’ny sehatra afrikanina. “I Tonizia no hita fa ho mafy ny hiatrika azy. Mbola tsy resin’ireo mpilalao malagasy vehivavy mihitsy ry zareo. Maorisy kosa efa lavon’ny Makis na tany ivelany na teto an-toerana”, araka ny fanazavan’ity tekni­sianina ity hatrany.
Nanomboka tamin’ny taona 2010 ny ekipam-pirenena malagasy sokajy vehi­vavy no nandray anjara tamin’ny sehatra afrikanina. Laharana fahefatra izy ireo tamin’ny fiadiana ny ho tom­pon­dakan’i Afrika tamin’ny taona 2018 natao tany Botso­ana. Vokatra izay tsara indrindra tao anatin’ny valo taona. Ireo ekipa roa voalohany isaky ny vondrona miampy ny laharana fahatelo tsara indrindra no hiakatra dingana famaranana amin’ity taona ity.
Nilaza ny mpanazatra fa “tokony ho tsara kokoa noho ny vokatra farany no azo amin’ity lalao ity raha ny lalana nodiavina sy ny fanazarantena natao”.
Basket-ball amin’ny tora-pasika :: Iray vondrona amin’i Mongolia sy Nederlandy ary Brezila i Madagasikara